EasyLife: Fedora dịtụbeghị mfe | Site na Linux
Ndụ dị mfe bụ ihe dị mfe iji mee ihe na-enye ohere tinye ọtụtụ n'ime ngwungwu "mgbakwunye". Ọ na-enye gị ohere ịgbanwe ihe Mbido kasị ewu ewu. oru ngo Brazil na-eme ka ahụmahụ nke novice ọrụ mfe na fun site na-enye n'aka na- na "ezi-n'iji ya gee ntị" nke usoro n’ụzọ ngwa ngwa na-enweghị isi ọwụwa.
Site na mmemme a ị nwere ike iwunye ndị ọkwọ ụgbọ ala maka kaadị vidiyo gị, wụnye Flash, koodu vidiyo na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ime ndị ọzọ, ụfọdụ n'ime atụmatụ Easylife bụ:
Tọọ iwu "sudo" maka onye ọrụ oge niile;
Hazie ebe nchekwa rpmfusion maka mgbakwunye na sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ;
Wụnye ihe mgbakwunye Flash Player;
A na - etinye ụdị codec niile (divx h264, xvid, mp3, wdg);
Wụnye nvidia na ATI;
Wụnye Sun Java na Sun Java Plugin maka Firefox;
Na-ejikọ ya na sistemụ Java Java-switch-java;
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » EasyLife: Fedora adịtụbeghị mfe
Kama nke a, nke a na - etinye sọftụwia niile dị Iche I chọrọ! hehe
Ọ ka ga-ahụ otu esi eme ka ọsọ ọsọ nke Fedora, n'ihi na ugbu a, etinyere m ya, enwere m nwayọ nwayọ na netbook m, nke anaghị eme na bubulubuntu .. Ma ebe ọ bụ na achọrọ m mmemme na ezigbo ọsọ m kpebiri ịlaghachi na bubulubuntu juju,
Ysmụ okorobịa, nwalee Archbang ... ọgwụgwọ. Ọ na-efu obere ịhapụ ya otu masịrị gị, mana ọ bụ nnukwu ọkụ ma ọ dị 10. Kpachara anya, ọ na-abịa na Openbox (enweghị GNOME, enweghị KDE).
Nwoke ọma m gwa gị…. obere.
Ezi nkwanye, ọ bụ ezie na m ugbua na-eji Arch Linux, M na-akwado ya, ọ bụ ezie na ọ naghị abịa na desktọọpụ ọ bụla na ndabara 😉
Dị ka onye na-ekwu, EasyLife gbanwere Fedora ka ọ bụrụ ubuntu. Ma enweghị ịdị n'otu.
Otu esi emepụta ArchLinux repos to take home